डीपीएलको उपाधि सीवाईसी अत्तरियाले उचाल्यो, दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई सुनको जुत्ता, सनी पटेलले जिते दुई अवार्ड — Motivatenews.Com
डीपीएलको उपाधि सीवाईसी अत्तरियाले उचाल्यो, दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई सुनको जुत्ता, सनी पटेलले जिते दुई अवार्ड
काठमाडौं– सीवाइसी अत्तरिया तेस्रो संस्करणको रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा अत्तरियाले महेन्द्रनगर युनाइटेडलाई ३ विकेटले हराउँदै पहिलो पटक उपाधि उचालेको हो।
टस जितेर ब्याटिङमा आएको महेन्द्रनगरका ओपनर दिलीप नाथले ४३ रन बनाए। ४१ बल खेलमा उनले ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। कुशल मल्ल २५, रोहित पौडेल २४, आरिफ शेख ११ र महोम्मद नाभेद १० रनमा आउट भए। महेन्द्रनगरका ५ खेलाडी रन आउट भएका थिए। अत्तरियाका दिपेन्द्र रावतले २ ओभरमा ११ र दिपेन्द्रसिंह ऐरीले ४ ओभरमा २४ रन खर्चेर २÷२ विकेट लिए। सन्नी पटेलले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ११ रन खर्चेर १ विकेट लिए।
महेन्द्रनगरले दिएको १२४ रनको लक्ष्य अत्तरियाले १९.५ ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १२७ रन बनाएर पूरा गर्यो। अन्तिम २ बलमा ३ रन चाहिएको अवस्थामा सनी पटेलले दोस्रो अन्तिम बलमा अविनाश बोहोरालाई स्ट्रेट छक्का प्रहार गरेका थिए। पटेल २६ बलमा ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गरी ४७ रनमा अविजित रहे। अर्का अविजित ब्याट्सम्यान जितेन्द्रसिंह ठकुरीले ३ रन बनाए। अत्तरियाबाट अन्य खेलाडीमा जयकिसन कोल्सावालाले ३० र कप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरीले १७ रन बनाए। महेन्द्रनगरका महोम्मद नाभेद र अविनाश बोहोराले २–२ विकेट लिए।
खेलमा म्यान अफ द फाइनल अत्तरियाका सनी पटेल भए भने पटेलले म्यान अफ द सिरिजको पुरस्कारमा २ लाख नगद पाए। उपाधि जितेसंगै अत्तरियाले ३० लाख सहित ट्रफी र मेडल पाएको छ भने उप विजेता महेन्द्रनगर १२ लाखमा चित्त बुझाएको छ।
यस्तै प्रतियोगिताको मोस्ट भ्याल्युएवल प्लेयर सिवाइसी अत्तरियाका कप्तान समेत रहेका दिपेन्द्रसिंह ऐरी चुनिए। दिपेन्द्रले सुनको जुत्ता पाए । कप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरीले ७ खेलमा १ सय ६८ रन बनाउनुको साथै १० विकेट लिएका थिए।
अत्तरियालाई उपाधि जिताउन उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका सनी पटेल म्यान अफ द सिरीज र बेस्ट ब्याट्सम्यान घोषित भए। सन्नीले ७ खेलमा ६ पटक ब्याटिङ गर्ने मौका पाउँदा कुल २ सय २ रन बनाए । त्यस्तै बलिङमा पटेलले ९ विकेट लिएका थिए। बेस्ट ब्याट्सम्यानमार्फत एक लाख र म्यान अफ द सिरीज चुनिएकोमा २ लाख प्राप्त गरे । भुवन कार्की प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट बलर चुनिए। कार्कीले एक लाख प्राप्त गरे । कार्कीले ७ खेलमा १४ विकेट लिएका थिए ।
अत्तरियाले उपाधि जितेसँगै नगद ३० लाख र महेन्द्रनगर उपविजेता रहँदै १२ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। शरद भेषावकरको कप्तानीमा रहेको महेन्द्रनगर र दीपन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानीमा रहेको अत्तरियाबीच फाइनलमा पहिलो पटक भिडेका थिए । भेषावकरको कप्तानीमा रहेको टिमले यसै वर्ष मात्रै पोखरा प्रिमियर लिग जितेको थियो। यसअघिका दुई संस्करणको उपाधि स्थानीय टोली टिम चौराह धनगढीले उचालेको थियो। धनगढी क्रिकेट एकेडमीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा ६ सहरका ६ फ्रेन्चाईज टोलीको सहभागिता रहेको थियो ।
२०७५ फागुन ११ गते प्रकाशित
त्रिकोणात्मक सिरिजमा आज नेपाल र नेदरल्याण्ड्स खेल्दै
मलेसियाविरुद्ध नेपालको सानदार जित, मलेसिया ९ विकेटले पराजित
आइपिएल क्रिकेट : दिल्ली र चेन्नई भिड्दै
कोरोना महामारीकै बीच आईपीएलको चौधौं संस्करण सुरु हुँदै
त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको पहिलो खेल नेदरल्यान्ड्ससँग
एनभीए भलिबल : महिलातर्फ एपीएफ क्लबको विजयी सुरुवात
ट्याक्टर र मोटरसाइकल ठोक्किदा एक जनाको मृत्यु , एक जना घाइते
किन शास्त्र र आयुर्वेदमा दिउँसोमा सुत्न अनुचित मानिएको छ ?
आज कस्तो रहला देशभरको मौसम ?
सर्लाहीमा शनिवार मध्यरातदेखि निषेधाज्ञा
एकैदिन ७ हजार २ सय ११ जनामा संक्रमण पुष्टि, काठमाडौं उपत्यकामा कति ?
कोरोना भाइरसबारे नयाँ अध्ययन, संक्रमितले एक डोज खोप लगाए हुने
मौसम पूर्वानुमानः आज चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
काभ्रेमा भोलीबाट निषेधाज्ञा
कञ्चनपुरमा थप तीन जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
आजको मौसम पूर्वानुमान: चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद बैठक
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेतृ झाक्रीले हिन्दीमै दिइन् यस्तो कडा दनक
सोमबार मध्यरातिदेखि आन्तरिक उडान बन्द हुने